LeadSift: Weghara Intent na Actionable na Social Media | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 29, 2015 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 30, 2015 Douglas Karr
Ndị ọchụnta ego na-anwa ijide data na atụmanya na ndị ahịa iji chọta ma dọta ndị na-eduga, wee debe ma mekwaa ndị ahịa ha nwetara. Enwere otutu teknụzụ n'ebe ahụ iji nwaa ịnwe data a. Offọdụ n'ime ihe ndị ahụ ezighi ezi na ndị ọzọ n'oge.
Ọ dị oke njọ na enweghị isi mmalite nke ozi a na-emelite nke ọma oge niile na ndị mmadụ. Enwere! Ndị mmadụ na-ahapụ ugboro ugboro na -enwe ezi omume na njedebe na omume na ntanetị n'ịntanetị elekọta mmadụ media. Kwa ụbọchị na kwa mgbe, kwa awa ma ọ bụ karịa.
Ọrụ siri ike bụ nhicha, nzacha na nchịkọta data ahụ n'ime nghọta bara uru. LeadSift emezu nke a, na-enye ezigbo ihe nnọchianya nke ndị ọrụ na-elekọta mmadụ, ụdị ndụ, ụdị mmadụ, ụdị ndị a gbasoro, ọnọdụ, iji ngwaọrụ, na oge ọrụ. N'ime oge, LeadSift nwedịrị ike ịgwa gị ụdị ụdị ị bụ onye ahịa, ebe ị na-eri nri, ebe ị nọrọ, ihe igwe onyonyo na-egosi na ị na-ele, yana ngwaahịa ndị ị na-eji.
LeadSift bụ usoro ọgụgụ isi nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-enyere ndị ahịa azụmaahịa gị aka ịnapụ mmeri mgbe niile site na izipu ozi ziri ezi, ọdịnaya, okike, mgbasa ozi na ahụmịhe mmekọrịta maka ndị ahịa ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị.
LeadShift Na-ewuli Data Ntanye Aka Nnọọ Ya N'iji Usoro Ndị A
Ikpa - LeadSift na-akpụ akpụ na netwọkụ mmekọrịta na-anọchi anya ihe karịrị nde 500. A na-emelite data ha kwa nke abụọ, a na-ewepụta ya maka nyocha miri emi na-aga n'ihu. Oge obula mmadu kwuputara ebumnuche iji zuta ngwa ahia gi ma obu otu onye isompi gi; ọ na-egosi na dashboard anyị. LeadSift na-ede ihe karịrị nde 180 nke ndị na-elekọta mmadụ na-arụ ọrụ kachasị maka gị iji kpokọta nghọta site na iru.
Dezie - Na-esote, LeadSift na-akọwa data gburugburu ihe ndị dị mkpa dịka ndị ahịa gị, atụmanya, ụlọ ọrụ na mmekọrịta. N'iji ihe karịrị akara 50 sitere na ederede, eserese ntanetị, na meta-data, usoro ihe ọmụmụ nke Leadsift nwere ike ịkọpụta onye onye ahụ bụ, ihe ha na-ekwu maka ya na ebe ha si azụ ahịa. Site na edemede ndị a, LeadSift na-amalite iwulite njirimara profaịlụ nke nwere ike ịchụpụ mgbasa ozi gị, ihe okike, ọdịnaya, na atụmatụ azụmaahịa.
wepụ - Maka onye ọrụ ọ bụla anakọtara na sistemu LeadSift, ha wepụtara ihe karịrị 100 gbasara ha, sitere na demographics, psychographics and information information. Na iji naanị data dị n'ihu ọha, ha nwere ike ịkọ ma kwupụta ebumnuche na ihe ndị na-eri ya n'ụzọ ziri ezi. Nlere ogo nke 360 ​​nke ndị na-azụ ahịa na-enyere gị aka iru ndị na-ege ntị n'ahịa ahịa na ozi dị mkpa na oge kwesịrị ekwesị n'ofe ọwa niile.
Tụlee - Site na nchịkọta nke data zuru ezu na nghọta nwere ike ime ihe, LeadSift na-ekpughe ohere zoro ezo ka ị wee nwee ike ịme mkpebi ahịa ahịa amamịghe. Nchọpụta ọchụchọ nyocha na-enweghị nghọta na-enye gị ohere igwu ala kpamkpam n'ime data iji mata ọnọdụ na usoro. Ihe nlere anya na-enye nkọwa dị elu nke akara gị, akara ngosi asọmpi, na ọnọdụ ụlọ ọrụ na ezigbo oge.
rụọ ọrụ - Smarter marketing pụtara itinye data na nghọta anyị iji rụọrọ gị ọrụ. Ihe ndiiche gi di iche na ozi gi ma rute ndi na ege gi nti n’ebe nile. Nweta mmekorita ahaziri iche.
Ihe data enwetara site na LeadSift bụ maka atụmatụ mgbasa ozi na ịzụrụ, nkewa nke ndị na-ege ntị, nghọta dị omimi, na-atụ anya njem onye na-azụ ahịa na ịhazi ozi maka atụmanya ma ọ bụ onye ahịa. Leadsift na-enye ihe zuru oke API mee ka profaịlụ data gị baa ọgaranya ma ọ bụ iwulite ahụmịhe ahaziri iche. Ule Na-eduga onwe gị na post a - anyị etinyewo ngwa ọrụ ha na saịtị anyị.
Nke a bụ mmebi nke ahụ LeadSift weputara nke kachasi elu na profaịlụ nke ha na-esote na soshal midia!
Ngosipụta: Anyị nwere nkwekọrịta ozi na ebe ma ọ bụrụ na ị kpebie ịbanye na Leadsift.
Tags: nnukwu datana-edugankwalite profaịlụdata mmekọrịtanchịkọta data na-elekọta mmadụakara ukwu mmekọrịtanghọta mmadụọgụgụ isi mmadụusoro ọgụgụ isi nke mmekọrịta mmadụ na ibe yaprofaịlụ mmekọrịta